Kismaayo News » Maxaad kala socotaa Xaaladda nololeed ee degmada Afmadow + Video
Maxaad kala socotaa Xaaladda nololeed ee degmada Afmadow + Video
Kn: Bishii 12aad – 2013 horaanteedii waxaa degmadda Afmadow ku tagnay booqosho shaqo. Safarkaas waxaa qeyb ka ahaa xubno ka tirsan Ururka Saaxiibtinimadda Somalia iyo Finland (Finland-Somalia Association). Xiliggii aan ku sugnayn degmadda Afmadow waxaan u kuurgalay xaaladda degmada iyo baahiyadda kala duwan ee halkaas ka jirey, sidoo kale waxaan degmada gaarsiinay dawooyin kala duwan oo baahi weyn ay degmadu u qabtay.
Ururku wuxuu sadexdii sano ee la soo dhaafay kaalmo u fidinayey kana hawlgalayey MCH.ka Afmadow, wuxuu xarunta ku kordhiyey labo qol oo dhalmo, sidoo kale Ururku wuxuu xarunta ku soo kordhiyey shaybaar qalabeysan oo halkaas aan horey uga jirin, dawooyin kala duwan iyo tababaro loo fidinayey shaqaalaha xarunta.
Sida aad ka arki doontaan warbixinta maqalka iyo muuqaalka ah, degmadda waxaa ka jira baahiyo badan. Waxaan cid walba oo wax ka geysan karta horumarinta degmadda Afmadow ka codsaneynaa in ay arintaas ka soo qeyb-qaataan khaasatan reer Jubbaland, maamulka Jubba, dowlada dhexe, ururadda caalamiga ah iyo kuwa wadaniga ah.
Waxaa u baahan in gacan degdeg ah laga geysto caawinta agoonta, curyaamiinta, nadiifinta ceelasha, taageerida dhalinyarada iyo Isboortiga, kaalmeynta hooyooyinka iyo farshaxanka.
Qofkii raba inuu gacan ka geysto horumarinta degmadda Afmadow wuxuu nagala soo xiriiri karaa emailkan: s-s.seura@suomi24.fi
Fadlan idinkoo mahadsan soo saara video.ga iyo akhbaartaas kooban shaashadiina